काठमाडौँ, २६ पुस । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का नेता प्रभु साहले आफ्नो चिनारीमा थप विविधता थप्दै अब गीतकार र निर्माताको रुपमा समेत उभ्याएका छन । ‘मधेस के माटी’ गीति एल्बममार्फत साह गीतकार/निर्माताको
कसरी गरे निर्देशकले नायिकालाई यौन प्रस्ताव?
भिडियो निर्देशक मुनाल शिशिर कोइरालाले आफूलाई यौन प्रस्ताव राखेको मोडल तथा अभिनेत्री आयुषा राईले आरोप लगाएकी छिन् । ३ महिनामा नेपालको टप अभिनेत्री बनाइदिन्छु भन्दै आफूसँग सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्दै
अमिरको ‘पिके’ ले कमायो ३ सय करोड
एजेन्सी । आमिर खान त्यस्ता अभिनेता बनेका छन् जस्ले आफूले बनाएको रेकर्ड आफैले तोडेका छन् । बलिउडमा १०० करोड व्यापार गर्ने पहिलो फिल्म ‘गजिनी’ का अभिनेता आमिरले आफ्नै फिल्म थ्री
प्रेम लुकाउँदै रणवीर र दिपीका न्यूयोर्कमा
बलिउडका चर्चित दुई कलाकार रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणले आफ्नो प्रेमलाई स्विकार गरेका छैनन् । तर, यी दुईको गुपचुप मस्ती भने कसैबाट छिपेको छैन । हालै मात्र दीपिका र रणवीर
रजनीकान्तको ‘लिंगा’सँग नेपाली ‘विधुवा’
आज शुक्रबार नेपालका हलमा २ चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन् । जसमा मनोज श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘विधुवा’ र साउथ इन्डियन सुपरस्टार रजनीकान्तको ‘लिंगा’ छन् । चलचित्र ‘विधुवा’लाई गिरिप्रसाद सुनारले निर्माण
काठमाडौं, १२ पुष । बलिउडमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका तर अविवाहित प्रेमजोडीको कुरा गर्दा रणवीर कपुर र कट्रिना सैफको सधै चर्चा हुन्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । पछिल्लो समय
‘अलराउण्डर’ बन्न चाहने सोनाम
काठमाडौं, १० पुष । पौष १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म जिन्दगी रक्सुबाट मोडल, गायक, म्युजिक भिडियो निर्देशक तथा भिजे सोनम पाख्रिनको परिचय थपिंदै छ, अभिनेता । यो फिल्ममा सोनम
मल्लिकाको फिल्म ‘डर्टी पोलिटिक्स’ को ट्रेलर लन्च (ट्रेलर सहित)
एजेन्सी । हट र सेक्सी नायिकाको लिस्टमा नाम लेखाउन सफल नायिका मल्लिका शेरवातको फिल्म ‘डर्टी पोलिटिक्स’ को ट्रेलर लन्च भएको छ । लामो समय देखि बलिवुड भन्दा टाढा रहेकी हट र
सोनाक्षी अब गायिका बनिन्
एजेन्सी – बलिउडकी चर्चित नायिका सोनाक्षी सिन्हाले आफूलाई गायिकाका रुपमा समेत अघि बढाएकी छन् । दवंगबाट बलिउडमा छाएकी सोनाक्षीले हालै पाकिस्तानी गायक इमरान खानसँग एउटा गीत गाएर आफूमा गायन प्रतिभा
प्रियंकाको आमा चकलेट चोर !
एजेन्सी – आफू सानो छँदा आमाले चकलेट चोरेर आफूलाई दिने गरेको बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले बताएकी छन् । सञ्चारकर्मीसँग निकै खुल्ने मानिने बलिउड अभिनेशी प्रियंका चोपडाले एक कार्यक्रममा आफ्नो चकलेटसम्बन्धी
डन चरिका प्रेमिका खुश्वु पिएचडीको तयारी गर्दै
लन्डन, १ पुष । प्रहरीको गोलीबाट मारिएको डन दिनेश अधिकारी चरीका प्रेमिका खुश्वु ओली लण्डनमा पिएचडीको तयारी गरीरहेको खबर प्राप्त भएको छ । वीनेपालीडटकमले जनाएअनुसार उनी मार्टस गरेकै युनिर्भसिटीबाट पिएचडी